Volana Febroary : Ho rakotra fampisehoana ny lapan’ny fanatanjahantena etsy Mahamasina -
AccueilVaovao SamihafaVolana Febroary : Ho rakotra fampisehoana ny lapan’ny fanatanjahantena etsy Mahamasina
Volana Febroary : Ho rakotra fampisehoana ny lapan’ny fanatanjahantena etsy Mahamasina
06/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fanombohan’ny fampisehoana goavana. Ny volana febroary, ary ao anatin’ny fetin’ny mpifankatia matetika no hanokafan’ireo mpikarakara seho ireo fampisehoana goavana eto an-drenivohitra. Amin’ity taona ity, dia ho rakotra fampisehoana ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ao anatin’ny volana febroary, ary ao anatin’izany ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia isaka ny 14 febroary. Andro alarobia anefa ny 14 febroary, izay mbola ao anatin’ny andro fiasana sy tsy dia fanaovana hetsika loatra. Fampisehoana telo manodidina ny resaka fitiavana no hifandimby amin’ity toerana ity, ka hisantatra izany ny « Ndao hihira », hiarahana amin’i Mirado sy Tovo J’hay ny alahady 04 febroary manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Sambany teo amin’ny tantara no hiara-dia amin’ny fampisehoana toa izay izy mirahalahy ireto, izay samy manana feo miavaka. Anisan’ny mpanakanto fantatra eo amin’ny tononkira feno resaka fitiavana anefa izy mirahalahy. Ho vahinin’izy mirahalahy amin’io fampisehoana io kosa i Tosy sy Christian K.
Efa fanaon’ny LH Pro isan-taona ihany koa ny mankalaza ny fetin’ny mpifankatia ao anatin’ny hira sy hatsikana hiarahana amin’ireo kalaza. « Amour’rire » no lohatenin’ny fampisehoana feno hatsikana, ary hiarahana kosa amin’i Gothlieb sy Françis Turbo ny zoma 16 febroary. Sambany ho an’ity seho ity no hotanterahina etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena, raha seho indroa miantaona hatrany izany teo aloha tetsy amin’ny CCesca Antanimena.
« Mifampitantana », io indray kosa no seho fahatelo izay tohin’io seho io tamin’ny taona lasa. Raha niarahan’i Bodo sy Poopy ny andiany voalohany tamin’ny taona lasa, dia Njakatiana sy Bodo kosa no hanafana izany amin’ity taona ity. Hanjaka araka izany ny fampiaraham-peo, ary efa maromaro rahateo ny hira niarahan’izy mianadahy. Tafiditra amin’ireo hetsika entin’i Bodo hankalazana ny 30 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika ihany koa io seho io.
Vidim-bary : ATAO IZAY HIROTAHAN’NY VAHOAKA
Tafakatra roa arivo ariary ny kilaon’ny vary gasy fihinan’ny vahoaka madinika. Tsy vitan’ny hoe niakatra ny vidiny fa tena tsy misy vary mihitsy eny amin’ny tsena. Nafenina aiza daholo àry ireny vary ireny ary iza ...Tohiny
Gare routière Ambohimangakely : Tontosa hatramin’ny 65% ny asa fanamboarana
Seranam-piaramanidina Ivato : Hiova endrika tanteraka
Antonio Sanchez-Benedito : Notolorana Commandeur de l’Ordre National Malagasy
Coup d’Etat”-n’i Andry Rajoelina : Voatery “mamelatra” ireo reny very asa